ထို့အပြင်တိုရွန်တိုကျွန်းလေဆိပ်အဖြစ်လူသိများ Billy ဆရာတော်လေဆိပ်,
by ဂျိန်း McLean
တိုရွန်တိုလေဆိပ်ဟိုတယ် | အကောင်းဆုံးတိုရွန်တိုနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း | ထိပ်တန်းတိုရွန်တိုဆွဲဆောင်မှုများ
အဆိုပါ Billy ဆရာတော်လေဆိပ်ကိုလည်းလေ့တိုရွန်တိုကျွန်းလေဆိပ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းခြင်းနှင့်ယခင်ကတိုရွန်တိုစီးတီးစင်တာတွင်လေဆိပ်, လေဆိပ်ကုဒ် YTZ အမည်ရှိရုံတိုရွန်တိုမြို့၏ကမ်းနားကိုချွတ်သည်။ အဆိုပါလေဆိပ်ပေါ်တာလေကြောင်းလိုင်း, Air ကိုကနေဒါနှင့်ပဋိညာဉ်စာတမ်းရဟတ်ယာဉ်များနှင့်လေယာဉ်များအားဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။
လေဆိပ်နှင့်ထံမှကူးတို့ဝန်ဆောင်မှုမဆိုလေကြောင်းလိုင်းလက်မှတ်တွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဖွင့်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပေမယ့် 2015 ခုနှစ်အဖြစ်ရွေ့လျားလမ်းဘေးစင်္ကြံနှင့်အတူတစ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလည်းခရီးသည်မှ terminal ကို access ကိုပေးသည်ဖြစ်ပါတယ်။
* နောက်ဆုံးရေးသားချိန်ဇန်နဝါရီ 2016 *
အဘယ်ကြောင့်ခရီးသည်များ Billy ဆရာတော်လေဆိပ် Choose မလား?
ဓာတ်ပုံယဉ်ကျေးခရီးသွားမှင် / Getty Images
အထမ်းသမားလေကြောင်းလိုင်း နှင့် Air ကနေဒါလေဆိပ်ဝတ်ပြုကြလော့။
လောလောဆယ်ပေါ်တာ (အချို့ရာသီအလိုက်) ကနေဒါ 15 နေရာများသည့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံတို့တွင် 9
ကနေဒါ: မိုးကြိုးဂလားပင်လယ်အော်, Sault-Ste ။ မာရီ, Sudbury, Timmins, မြောက်အမေရိကဂလားပင်လယ်အော်, တိုရွန်တို , ဝင်ဆာ, Montreal , Mont-Tremblant , ကွိဘက်စီးတီး , Ottawa, Moncton, Halifax, Stephenville နှင့် St. ယောဟန်၏။
ယူအက်စ်အေ: ဘော်စတွန်, ဘာလင်တန်, Newark, Pittsburgh, Charleston, ချီကာဂို, Orlando တွင်-မဲလ်ဘုန်းမြို့, မုရတုသဲသောင်ပြင်များနှင့်ဝါရှင်တန်။
သင်တို့သည်ဤခရီးစဉ်မဆိုအကြားပျံသန်းနေသောနေတယ်ဆိုရင်, Porter ဝန်ဆောင်မှု၏အဆင်ပြေစေရန်နှင့်ထူးချွန်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပေါ်တာလေကြောင်းလိုင်းဤမျှလောက်ကြီးစွာသောသည်အဘယ်ကြောင့် Read ။
သည်အခြားအမေရိကန်နှင့်တောင်ပိုင်းခရီးစဉ်ကိုချိတ်ဆက်ရန်ဘော်စတွန်ထဲက JetBlue နှင့်အတူပေါ်တာလေကြောင်းလိုင်းမိတ်ဖက်။
Air ကိုကနေဒါကိုလည်းတိုရွန်တိုကျွန်းလေဆိပ်ထဲကပေမယ်သာ Montreal မှပျံ။
အဘယ်သို့ငါ Billy ဆရာတော်လေဆိပ်ရယူပါသလား?
တစ်ဦးကလူကူးဥမင်လိုဏ်ခေါင်း Billy ဆရာတော်လေဆိပ်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးစေခြင်းငှါ 2015 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Billy ဆရာတော်လေဆိပ်©ဓာတ်ပုံ
လွန်းပျံယာဉ်ဝန်ဆောင်မှု: ပေါ်တာလေကြောင်းလိုင်း Starbucks ကအနီးရုံ York နဲ့တပ်ဦးလမ်းများ၏အနောက်တောင်ဘက်ထောင့်အတိတ်, အခမဲ့လွန်းဝန်ဆောင်မှုတပ်ဦးစိန့်၏တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်တိုင်း 10 သို့မဟုတ် 15 မိနစ်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါအာကာသယာဉ်ဟာလေဆိပ်ကြိုပို့ယာဉ်မှရရှိရန်နှင့် ပတ်သက်. 10 မိနစ်ကြာပါတယ်။ သင်ပင်ပြည်ထောင်စုဘူတာထဲမှာပေါ်တာကို kiosk မှာသင့်ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်သို့စစျဆေးနိုငျ - ရုံများအတွက်ဆိုင်းဘုတ်များအတိုင်း "Skywalk ။ "
မော်တော်ကား by: Billy ဆရာတော်လေဆိပ်၏ပုံမှန်မဟုတ်သော, မြို့လယ် setting ကိုအား On-site ကိုကားရပ်နားရုံ Off-site ကိုတည်ရှိသောကြောင့်အများစုနှင့်အတူကန့်သတ်သည်။ သုံး Billy ဆရာတော်လေဆိပ်တွင်ရပ်နားအများကြီးရှိပါတယ်:
နှစ်ခုလမ်းများအနောက်ဘက် Bathurst စိန့်နှင့်ကူးတို့ terminal ကို၏အားကစားကွင်းလမ်း, 1 တောင်ပိုင်းအဆုံး။ ကူးတို့ terminal ကိုတစ်ဦးလမ်းဘေးအပေါ်တစ်ဦးကစုံတွဲမိနစ်လမ်းလျှောက်။ အဘယ်သူမျှမကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု။
2. အနီးဆုံး option ကို On-site ကိုကျွန်းယာဉ်ရပ်နားသည်။ ယာဉ်ရပ်နားအခကြေးငွေကားကူးတို့ကုန်ကျစရိတ်မပါဝင်ပါဘူး။ အွန်လိုင်း reserve ။
Bathurst ရုံအရှေ့ 3. ကနေဒါ Malt စက်ရုံ။ တစ်ဦးကစုံတွဲမိနစ်လမ်းလျှောက်။ အဘယ်သူမျှမကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု။
ရေရှည်ယာဉ်ရပ်နားဘို့အများအားဖြင့်ပစ်မှတ်ထား,2ကီလိုမီတာကွာလေဆိပ်လွန်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူကြီးမားတဲ့စက်ရုံအတွက် parking ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်မဲအတွက်ဒီ service ကိုဘွတ်ကင်လုပ်ရန်။
နောက်ထပ်အကြီးအစျေးပေါ option ကို (ထိုကဲ့သို့သော Oakville ကဲ့သို့) အခမဲ့ယာဉ်ရပ်နားအတူ GO ဘူတာမှမောင်းနှင့်အခမဲ့လွန်းပြည်ထောင်စုဘူတာဖို့ GO ရထားယူရန်ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်သူ့ Transit: လေဆိပ်အနီးရှိပြည်ထောင်စုဘူတာမှတ်တိုင်ကနေ Bathurst ဘူတာနှင့် 511 ကနေ TTC Streetcar 509 ။ သငျသညျပြည်ထောင်စုဘူတာကနေလာမယ့်လျှင်မည်သို့ပင်သည်, လွန်းဖြစ်ကောင်းပိုမိုလွယ်ကူသည်။
အဆိုပါ Terminal နှင့်မှရယူခြင်း
Billy ဆရာတော်လေဆိပ်ရုံတိုရွန်တိုမြို့၏ကမ်းပယ်တည်ရှိသည်။ Image ကိုယဉ်ကျေးပေါ်တာလေကြောင်းလိုင်း။ Google Maps တွင်ကြည့်ရန်
သငျသညျအဓိကလေဆိပ်ဝင်ပေါက်မှာရောက်လာပြီးတာနဲ့သင်ကကူးတို့ယူပါသို့မဟုတ်လေဆိပ် Terminal ကိုရမြေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်းလျှောက်ဖို့ဖြစ်စေလိုပါတယ်။ အဆိုပါလေဆိပ်ကြိုပို့ယာဉ် Bathurst လမ်း၏ခွမှာတည်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါကူးတို့စီးခရီးသွားများနှင့် Non-ခရီးသွားများအတွက်အခမဲ့သာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာပါတယ်။ 121 မီတာမှာကတကယ်တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအတိုဆုံးကူးတို့ခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် - ခန့်နေ့စဉ် 15 မိနစ်ထွက်ခွာမည်။
အဆိုပါကူးတို့ကျွန်းယာဉ်ရပ်နားတွေအများကြီးမှာ၎င်းတို့၏မော်တော်ကား parking လူများအတွက်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ကားတစ်စီးများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်လူများအတွက်အခမဲ့ CAD (2016 ၏ကဲ့သို့) $ 11, ဖြစ်ပါတယ်။
တိုရွန်တိုအတွက်အကောင်းဆုံး Off-Beat နေ့စွဲအကြံပြုချက်များ
တစ်ဦး Park ကတိုရွန်တိုအတွက်တိုင်းအကျိုးစီးပွားများအတွက်ရှိပါတယ်
ဧည့် Hampi များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခရီးသွားလမ်းညွှန်
Maricopa အဘိဓါန် မှစ. Phoenix မြို့မှခရီးသွား Times သတင်းစာနှင့်အခြားအရီဇိုးနားမြို့ကြီးများ
ရှာဖန်ကျွန်းများတွင်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဘေ့စဘောဂိမ်းမှလက်မှတ်တွေ Get လုပ်နည်း
Reno အတွက်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်အားလပ်ရက် Weekend မိသားစုလှုပ်ရှားမှုများ
Frankfurt မှစ. , Cologne မှရယူခြင်း
မက္ကစီကိုဒီဆောင်းရာသီခံစားကြည့်ပါ5မှော်နည်းလမ်းများ
စုံတွဲများအတွက်ထိပ်တန်းအမေရိကန်နှင့်ကနေဒါ6နှင်းလျှောစီး Resorts